Ikofu yenye yezolonwabo ebomini bam endingenakuyenza ngaphandle kwayo. Nditshiza iRost eyosiweyo emnyama eyosiweyo ngoku kunye nomnandi wayo, owenziwe kumenzi wam westrestop espresso. Abahlobo bam abasenyongweni baneshopholo yekofu Akukho nto ndiyithandayo ngaphezu kokufumanisa enye indlu yekofu engadityaniswanga xa ndisendleleni. Uninzi lwexesha endidibana ngalo nomntu othile, kukwivenkile yekofu. Ikofu iye yadlula ekhuthazayo kwaye ngoku sisiselo esinxulunyaniswa neenkumbulo ezininzi ezintle kum.
Kuba ndingumntu osela ikofu rhoqo kwaye andikwazanga ukusebenza imini yonke ngaphandle kwekomityi enye yekofu, ndiyifumana le "infographic" iqaqambe ngokwenene. Ininzi nje inyaniso kuyo. Enkosi ngokwabelana nathi ngoku Douglas.
Ndandicinga into efanayo!
Ndingumntu osela iti ngokwam kodwa yi-infograph enkulu kakhulu uDouglas. Kungafuneka ndiyiprinte loo nto kwaye ndiyabelane ngayo nomama kwixesha elizayo xa ndindwendwela - mhlawumbi ngoku uza kuyifumana le nto ndiyenzayo LOL Oh kwaye ndiyithanda kakhulu ingcaciso kaGoogle+ 🙂